Hirgelinta iskuul waajib ah xiliga fasaxa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ardey dhigata Arabyskolan oo ku yaala Växjö. Foto: Ines Micanovic/ Sveriges Radio
Hirgelinta iskuul waajib ah xiliga fasaxa
La daabacay onsdag 13 juni 2012 kl 11.33
Xisbiga Socialdemokratiga ayaa hindise ku soo bandhigay in ardeyda dugsiyada hoose dhigata ee aan ku guulaysan in ay gaaraan hadafka waxbarashada ee u yaala iskuulka in waajib laga dhigo in ay iskuulka aadaan sommarka (xagaaga). Sidaas waxaa maantay sheegay Mikael Damberg oo ka tirsan xisbiga sociademokratiga.
- kumaankun ardey ah ayaa maantay dugsiyada hoose dhameeya ayaagoon haysan shahaado wanaagsan oo ay ku soo gali karaan dugsiga sare(gymnasium). Taas ma ahan mid soconaysa. Waa in aan hubinaa in dhamaan ardeyda oo dhan helaan bilow iskuul oo fiican iyo in ay ka baxaan dugsiyada hoose iyaga oo haysta shahaado dhamaystiran. Saas darteed waxaan rabnaa in aan hubino ardeyda aan gaarin hafka aqooneed iskuulka in ay helaan macallimiin xirfad wanaagsan si ay ardeydaan u helaan fursad ay ku soo galaan dugsiga sare, ayuu yeri Mikael Damberg mar uu la hadlayey laanta wararka ee Ekot.
Maantay ardeyda dugsiyada hoose dhameeya ayagoon qaadan shahaado dhamaystiran ayaa kor u dhaafaysa 12 000 oo ardey. Waxa uu hindisa xisbiga socialdemokratiga uu kaga gadisanyahay iskuulada hada jira ee sommarka(xagaaga) la dhigto ayaa ah in kan dhore waajib ku noqonayo ardeyga aan gaarin hadafka aqooneed ee u yaala iskuulada.
Sida uu Mikael Damberg sheegay hindisahaan hadoo hirgalo ayaa qiimo ahaan ku kici doona lacag dhan 125 milyan oo koron. Hindisahaan ayaa waxa uu ku jiri doona miisaaniyada xisbiga socialdemokaratiga soo bandhigi doonaan dayrtaan soo socota. Sida caada siyaasaded ee wadankaan yahay xisbiyada mocaaradka ah ayaa ayaguna soo bandhiga sannad-kasta miisaaniyad kasoo horjeeda tan ay dowladda soo bandhigto.